अन्तरवार्ता Archives - Myagdi Online
पछिल्ला वर्षहरुमा वृद्धि भएपनि चालु खर्च धान्न मस्किल हुने अवस्थामा पुगेको छ । विगत ५ वर्षमा राजस्व संकलन र चालु खर्चको अवस्था विश्लेषण गर्दा विकास खर्चका लागी मुलुक पूर्णतय परनिर्भर हुनथालेको देखिन्छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्दा त्यसलाई थेग्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने यसको प्रत्यक्ष भार वैदेशिक... पुरा पढ्नुहोस
म्याग्दी उद्योग बाणिज्य संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालसंग समृद्ध साप्ताहिक र म्याग्दीअनलाईन डटकमका सम्पादक कमल खत्रीले गर्नुभएको कुराकानी । १) यहाँलाई स्वागत तथा म्याग्दी उद्योग बाणिज्य संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई । धन्यबाद २) म्याग्दी उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । जिल्लामा उद्योग र व्यापार क्षेत्रको विकासमा कस्तो... पुरा पढ्नुहोस
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७ हजार ८ सय नाघ्यो, एकैदिन ६७१ जनामा संक्रमण पुष्टि
म्याग्दी ४ असार । नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको सख्ंया ७ हजार ८ सय नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ६७१ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो । नयाँ थपिएका संक्रमितमा ८० महिला र ५९१ जना पुरुष रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिएको... पुरा पढ्नुहोस
म्याग्दीको सबैभन्दा दुर्गम बस्तीहरुलाई समेटेर बनेको धवलागिरि गाउँपालिकाको विकासमा जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाब प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको छ । शिक्षण पेशाबाट बाहिरिएर राजनीतिमा होमिएकी पुन म्याग्दीका स्थानीय तहहरुमा एक्ली महिला प्रमुख हुन् । स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व कति सफल ? नमुना कार्य के भए ? चुनौतिका चाङ के–कस्ता छन ?... पुरा पढ्नुहोस
मंगलामा दिगो योजनालाई प्राथमिकतामा : अध्यक्ष रोका
3 बर्ष,4दिन अगाडि
म्याग्दी, ५ जेठ । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को लागि मंगला गाउँपालिकाले योजना तर्जुमाका जुट्ने तयारी थालेको छ । दुई बर्षमा गाउँपालिका मार्फत छनौट भएर कार्यान्वयन भएका विकास निर्माण योजनाहरुको समिक्षा सहित आगामी बर्षका योजनालाई दिगो र प्रभाबकारी बनाउनतर्फ गाउँपालिका जुटेको छ । कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावनायुक्त यस गाउँपालिकाले जनतालाई लाभ... पुरा पढ्नुहोस
मालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकलाई प्राथमिकता : अध्यक्ष रोका
3 बर्ष, 10 दिन अगाडि
म्याग्दी, ३० बैशाख । आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा मालिका गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकलाई प्राथमिकता दिएर योजना निर्माणको तयारी गरेको छ । स्थानीय तहका योजना बहसमा सहभागी हुँदै मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले जनतालाई सहज रुपमा गुणस्तर र निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि प्रत्येक वडामा सडक... पुरा पढ्नुहोस
रघुगंगामा ‘एक वडा एक योजना’ : अध्यक्ष भण्डारी
3 बर्ष, 19 दिन अगाडि
म्याग्दी, २१ बैशाख । रघुगंगा गाउाँलिकाले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा एक वडा एक गौरवको योजना निर्माणको तयारी गरेको छ । बस्तीस्तरको टुक्रे योजनाले विकासमा असर गरेको बताउदै आगामी आर्थिक बर्षमा एक वडा एक गौरवको योजनालाई प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए । समृद्ध साप्ताहिकको स्थानीय तहका योजनाको स्तम्भको लागि... पुरा पढ्नुहोस
जेसीजजका कार्यक्रमलाई गाउँकेन्द्रित बताउँछुः अध्यक्ष थापा
सामाजिक र युवाहरुको नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकासमा क्रियाशिल संस्था म्याग्दी जेसीजको सन २०१९ का लागि शाखा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका खम थापा मगरसंग म्याग्दी अनलाईन डटकमका सम्पादक कमल खत्रीले गर्नुभएको कुराकानी । १ स्वागत छ यहाँलाई –धन्यबाद २ म्याग्दी जेसीजको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । कस्तो अनुभुति गर्दै हुनुहुन्छ । –बिशेष गरि... पुरा पढ्नुहोस
वि.स २०४८ मा समुदायको अगुवाईमा बेनीमा स्थापना भएको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा पछिल्लो समय केही सुधारको कामहरु भएका छन् । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने जिल्लाकै अग्रणी शैक्षिक संस्थाका हिसाबले म्याग्दी क्याम्पसले गुणस्तर सुधारको पहल गरेको छ । मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा शास्त्र संकायमा कक्षा ११ देखि स्नातक तथा व्यवस्थापन संकायमा स्नाकोत्तर... पुरा पढ्नुहोस